Ngathi-i-Beijing Jinglong yeCarbon Technology ekhethekileyo, i-ltd.
I-Beijing Jinglong ekhethekileyo yeCarbon Technology Co, Ltd.
Yasekwa ngonyaka ka-2009, Beijing Jinglong Special Carbon Technology Co., LTD. i mveliso ngobuchule egxile kuphando, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo yeemveliso grafayithi. Iimveliso zethu eziphambili ziquka i-graphite electrode, i-graphite crucible, i-graphite mold, i-graphite tube, i-graphite block, i-graphite rod, i-graphite ye-pureity, i-graphite ye-isostatic, njl. kunye nezixhobo, kubandakanya iziko lokwenza i-graphite CNC, umatshini wokugaya we-CNC, i-CNC lathe kunye nomatshini omkhulu wokusaha, umatshini wokugaya umphezulu njalo njalo. Ukongeza, sifumene isiqinisekiso se-ISO9001 kunye nelayisensi yethu yokungenisa kunye nokuthumela kwelinye ilizwe. Imakethi yethu yaphesheya ibandakanya uMzantsi Korea, iSingapore, iOstreliya, iUSA, iJapan, iKhanada, iJamani, iPakistan neIndiya. Siyakwamkela ii-odolo ze-OEM kunye ne-ODM. Nokuba ukhetha imveliso yangoku kwikhathalogu yethu okanye wenze iimfuno ezizizo, wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi.
Umzi mveliso weSemiconductor
Umzi mveliso we-EDM (ukuSebenza koMbane oSebenzayo)
Umzi mveliso weAerospace
Umzi mveliso weFotovoltaic
Icandelo Lobunjineli boMatshini
Umzi-mveliso oBushushu ngeZinga eliphezulu
Amashishini amachiza kunye nePetrochemical
Ingcali yeShishini leGraphite
Ukugxila kushishino iimveliso grafayithi kangangeminyaka eli-10, thina imveliso enkulu-mveliso kunye nokulungiswa lweshishini ngokukodwa kwi-R & D kunye nokuveliswa kweemveliso grafayithi, ngokubonelela izisombululo isicelo mveliso ezahlukeneyo kunye nokusombulula ezahlukeneyo iimveliso grafayithi nobunzima ophezulu.
Ukumboza indawo ye-12000 yeemitha zesikwere, kunye nezixhobo zokulungisa i-graphite eziphambili, sinemveliso yonyaka yamaqhekeza angaphezu kwezigidi ezili-100.
Ulwenziwo wena: iimfuno zabathengi kunye nolindelo ziyatshintsha, singathanda ukwenza imveliso elungiselelwe wena ngokweemfuno zakho ezizodwa.
Uphando oluzimeleyo kunye nophuhliso
Siye sakha iqela R & D abanamava nobungcali. Ngophando lwayo oluzimeleyo lophando kunye namandla ophuhliso, siphuhlise uthotho lwemveliso eyahlukeneyo enamanqanaba ahlukeneyo okuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo kunye nokukhetha okungafaniyo.